Madax sare ee dalka oo salaad janaaso ku tukaday askartii ku dhimatay weerarkii SYL – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Madax sare ee dalka oo salaad janaaso ku tukaday askartii ku dhimatay weerarkii SYL
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta ka qeyb-galay salaadii Janaasada ee askar ka tirsaneyd ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo ku dhintay qaraxii shalay shalay lagu weeraray hotelka SYL ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa Allaah uga baryey inuu Janadii Fardowsa ka waraabiyo, dhammaan dadkii ku geeriyooday qaraxii shalay isla markaana caafimaad deg deh ah siiyo dadka dhaawaca ah.
“Waxaan u tacsiyeynayaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ehelladdii qarabadii dadkii shacabka iyo ciidamadda isugu jiray ee ku shahiiday qaraxii cadawgu ka geystay Muqdisho , Allah ha u naxariisto inta dhimatay kuwa dhaawaca ahna Allah ha caafiyo. Cadowga ummadda dhibaatadda la daba taagan ee sida naxariis daradda ah kula dhaqmaya, waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waa idin ka guuleysan doonaa “ ayuu yiri Madaxweynahu.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay daryeeleyso qoysaska ay ka tageen ciidamadda qaraxii shalay ku shahiiday iyaga oo difaacaya Diintooda, Dadkooda iyo Dalkooda islamarkaana ay bixineyso deymaha lagu leeyahay.
Previous: Totti oo shaaciyey cidda u diiday inuu ku biiro Ac Milan
Next: Beesha uu u dhashay Ninkii fuliyey weerarkii hotel SYL oo la shaaciyey